← Qormooyin hore
Akhbaar Huban: Xaqiijinta Kalsoonida iyo Daahfurnaanta Warbaahinta Soomaaliya
Innagoo xuseyno Maalinta Caalamiga ah ee La-dagaallanka Musuqmaasuqa, waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno miraha dadaalkii marqaati ee toddobadii bilood ee la soo dhaafay: oo ah farsamo loogu talagalay in lagula dagaallamo wararka been-abuurka ah ee warbaahinta Soomaaliya, kor loogu qaado tayada wararka, iyo in bulshada lagu baro aqoonsiga wararka been abuurka ah. iyo ilo wareedyo lagu kalsoon yahay. Waxaan u sameynay kordhin biraawsar Firefox iyo Chrome. Waxaan sidoo kale haynaa barnaamij Android ah oo ay hormarin ku socoto oo la heli doono toddobaadyada soo socda.
Halkan ka degso Akhbaar Huban Firefox: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/akhbaar-huban
Halkan ka degso Akhbaar Huban Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/akhbaar-huban/lmkafdjaimfcjkamcobbadkinhfdjhdk
Halkan ka degso faahfaahinta sida uu u shaqeeyo extension-kaDownload
Habka qiimeeynta loogu sameeyay 40ka websiteDownload
Tusaalooyin websaydh la qiimeeyay:
Waxaa qormadaan lagu xereeyey Marqaati mark’ay ahayd Diseembar 9, 2020 uu qoray Maxamed Mubarak.
Doorashooyinka Dadban: Sharciyad Yari iyo Toosnaan La’aan
Geedi socodka doorashada dadban waxaa wiiqay jileyaal badan ee ka bilowda dawladda dhexe, kuwa gobollada, iyo dad u tartamayay kuraas. Laaluush, handadaad, bedelid liisaaska ergada, iyo been abuur cad ayaa saameeyay inta badan kiisaska aan barnay.
Cod gadashada ma ahan uun guuldarro siyaasadeed ee waxey tahay qatar ammaan oo aad u ballaaran: waxey wadada u furtaa kooxo burcad ah ee arrinka ka faa’iideeysta ee kuraas u iibiyo dad iyaga ka tirsan.
Nidaamka khilaafaadka lagu xaliyo inta badan ma aysan shaqeyn –marki ay shaqeeysane, waxaa kahortagga hoggaamiyeyaasha siyaasadda iyagoo diida go’aankooda. Tani waxey su’aal ku keeneeysaa waxtarka iyo madaxbanaanida guddiyada doorashooyinka dadban.
Geedi socodka wuxuu muujiyay in wax aanan aheyn in ummadda dhan ay codeyso uusan yareey karin saameeynta uu cod gadashada ku yeelan karo natiijada doorashada; si walbo ha ahaatee, nidaamka hadda jira wuxuu u farsameeysan yahay cod gadashada sababtoo ah madaxweeynaha dadka si toos ah uma soo dooran doonaan xitaa doorasho guud hadii ay dhacdo.
Inta aysan dhicin doorashooyink 2021, waa in dib u eegis lagu sameeyaa dastuurka hadda jira inta aanan la ansixin oo laga dhigaa in madaxweeynaha ay si toos ah dadweeynaha u soo doortaan.
11 bilood ee sanadkan ka mid ah, marqaati waxey Heshiiska Daacadnimada la saxiixday jileyaalka siyaasadda ee Soomaaliya. Waxaa saxiixay Heshiiska musharaxiintaan soo socda: 6 ka socda Somaliland;9 ka socda Galmudug; 20 kasocda K/Galbed iyo 20 ka socda Puntland. Sidoo kale, 35 hoggaamiye dhaqameed iyo 3 musharrax madaxweeyne ayaa saxiixay, iyo in ka badan 30 xisbi siyaasadeed.
Heshiisyada ay saxiixeen shaqsiyaadkaas iyo xisbiyada lama ixtiraamin, qeeyb waxaa ka ah sababtan iyadoo PDP oo ah xisbiga talada hayo iyo Madaxweynaha ay diideen in ay saxiixaan. Markaas laga bilaabo waxaa cadaatay in musuqmaasuq ballaaran uu dhici doono; marqaati waxay halkan ku oogeeysaa waajibkeeda saarnaa iyadoo la eegayo Heshiiska, kaasi oo ahaa in ay ka warbixiso hirgelin la’aanta Heshiiska iyo in ay bixiso talooyin si dhibka hadda dhacay uusan si fudud u soo laaban doorashada 2020/1.
Waxyaabaha halkan ka muuqda waxay ku salaysan yihiin wareeysiyo lala yeeshay ergada doorashada, dad ka tirsan ololaha musharraxiinta, dad musharraxiin ah, iyo su’aalo ku saabsan habsocodka doorashada oo ay ka jawaabeen in kabadan 50 musharrax iyo hoggaamiye dhaqameed.
Sidoo kale waxaan sameeynay falanqeeyn xaga tirakoobka ah si aan u eegno xiriirka ka dhaxeeyo eedeeymaha ku saabsan qaladaadka iyo inta lagu kala guuleeystay. In kastoo gul yar aysan micnaheedu aheyn in musuqmaasuq uusan dhicin, habkan wuxuu inaga kaalmeeynayaa in aan helno meesha ay isugu yimaadaan eedeeymaha iyo in lagu kala guuleeysto tiro aad u weeyn ee aan caqliga geli karin. Sidoo kale waxaan u isticmaalnay falanqeeyntaan in aan eegno macquulnimada natiijooyinka lagu kala guuleeystay.
Waxaa hoos ku xusan noocyada iyo qaar ka mid ah dhacdooyinka musuqmaasuqa ee ka dhacay geedi socodkan doorashada dadban.
Handadaad iyo is-hortaagid waxay aheyd caadada geedi socodka
. Hoggaamiye dhaqameedka iyo musharraxiinta waxay soo sheegeen in ay la kulmeen handadaad nidaameeysan oo ay kula kaceen laamaha ammaanka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyo doonayo in ay saameeyaan cidda noqoneysa ergada wax soo doorata. In ka badan 75% dadki su’aalaha ka jawaabay waxay sheegeen in ay filayeen ama ay la kulmeen cabsi galin ama ergo been abuur ah.
Handadaada iyo faragelinta ergada waxey inta badan ka dhacday Jubbaland, K/Galbed, iyo Somaliland (doorashada Muqdisho loogu qabtay). Sababtana waxey aheyd sida muuqata musharraxiinta goboladaas ka soo jeeday ma aheyn kuwa ugu lacagta badan; tusaale ahaan, shaqsiyaadka qaar ee goboladaan ka soo guuleeystay waxey dhiibeen $500 oo laaluush ah kursigii iyadoo HirShabelle kursiga ugu badan ahaa $30,000.
Doorashooyinka qaar ee HirShabelle waxaa la qabtay maalin Jimce ah iyadoo aanan loo sheegin dhammaan musharraxiinta kuwi la rabay mooyaanee. Sidoo kale, musharrax ay diideen kooxda hirgelinta doorashooyinka dadban oo xabado ku riday goobta doorashada ayaa loo oggolaaday in uu tartamo. Wuxuu ku ‘guuleystay’ 88% ee codadka.
Musharraxiinta qaarkood waxaa loo diiday in ay soo galaan goobaha doorashooyinka marki magacooda albaabka la dhigay si laamaha ammaanka ay ka hortagaan in ay soo xaadiraan. Waxyaabahan oo kale waxey ku badnaayeen Jubbaland iyo K/Galbed. Dhanka kale hadii loo eego, lacagaha laaluushka ah ee gobladaas ma aysan badneyn.
Jubbaland waxaa ka dhacday in siyaasi caan ah uu ku guuldareystay aqalka sare lakin uu ku guuleeystay aqalka hoose kadib marki dhammaan musharraxiinta kale ee la tartami laheyd lagu qasbay in ay isaga haraan tartanka ama loo diiday in madasha ay soo xaadiraan. Wuxuu ku guuleystay 98% ee codadka.
Dad musharraxiin ah ayaa dadka ergada soo xulayay
Hoggaamiye dhaqameedka waxaa laga rabay in ay soo xulaan 50 ergo ka socoto beeshooda ee soo doorata hal musharrax; si kastaba ha ahaatee, ku dhawaad dhammaan kiisaski la eegay, hoggaamiye dhaqameedka waxey beecinayeen ergada oo ay ka gadayeen dadki musharraxiinta ahaa. Mararka qaar musharraxiinta waxey gadanayeen tiro ku filan oo ay ku guuleysan karaan, mararka qaarne dhammaan 50ka ergo ayey gadanayeen.
Tusaale ahaan, hal tartan ee Puntland ka dhacay wuxuu hoggaamiye dhaqameedka musharrax ka iibiyay 16 ergo. Musharraxi wuxu gatay 10 cod ee ah ergo kale wuxuuna ku guuleeystay 26 cod.
Musharraxiinta qaarkood waxey la tartamayeen dad iyaga ay keensadeen kuwaasi oo helay inta u dhaxeysa 7 iyo 0 cod. Musharraxiinta sidan sameyneysay waa kuwa gacanta ku hayay tiro aad u weeyn ee ka mid aheyd ergada sida kor ku xusan.
Dawlad goboleedyada si cad ayey u faragelinayeen liisaska ergada. Tusaale ahaan, hal hoggaamiye dhaqameed ee Galmudug ka soo jeeda wuxuu marqaati u soo diray dood tiro badan ee ku saabsan in ergada uu magacaabay lagu bedelay magacyo kale; cabashadiisa ee uu u diray xalinta khilaafaadka dheg jalaq looma siin.
Laaluusha aad ayuu u badnaa waana la caadeeystay
Laaluushka ugu badan wuxuu ka dhacay HirShabelle halkaas uu kursiga ugu qaalisan gaaray $2.5 milyan waxaana ku soo xigay Galmudug iyo Puntland (lacagta kursiga uu ku fadhiyo waxaan u xisaabinay isudarka dhammaan laaluushka ay bixiyeen musharraxiinta kursiga doondooneeysay).
Musharrax HirShabelle ku soo guuleeystay kursi baarlamaan wuxuu marqaati u sheegay in uu bixiyay $260K($150kun oo jeebkiisa ah iyo $110kun ee uu soo deynsaday) si uu kursiga u helo. Wuxuu helay 86% ee codadka. Kuwi la tartamayay waxaa ka kala baxay $150kun iyo $100kun. Taasi oo micnaheedu yahay in kursigaas uu ku fadhiyo $510kun.
Galmudug iyo Puntland sidaa si lamid ah ayey wax u dhacayeen.Marki marqaati ay weeydiisay sababta ay $300kun kursi baarlamaan ku bixinayaan, mid kamid ah ololaha musharraxiinta wuxuu sheegay in ay la xiriirto sharafta, xasaanada, iyo in ay fursad u helaan in madaxweynaha cusub ay doortaan iyagoo lacagihi ka baxay soo ceshta.
Ergada waxey cod siinayeen midka hal dollar dheeraada; doorasho walba waxaa ku guuleeysanayay midka lacagta badan. Ma cada in xaalada sidaan ahaan doonto marki xildhibaanada madaxweyne dooran doonaan, lakin labo xildhibaan oo goordhow la doortay ayaa marqaati u sheegay in lacagaha qof walba ka qaadan doonaan lakin ay u codeey doonaan cidda ay rabaan.
Qaar badan ee musharraxiinta doonaya in ay baarlamaanka galaan waxaa maalgeliyay PDP (loo yaqaan Dam Jadiid), ururkaas oo diiday in Heshiiska Daacadnimada uu saxiixo. Musharraxi hore loo soo sheegay ee $260kun ku bixiyay laaluush, wuxuu sheegay in madaxweynaha naf ahaantiisa uu u sheegay in uu maalgelin doono lakin weli uusan lacagti dib u arag.
In kastoo lacagaha dawladda la leexsaday 18ki bil ee u dambeeysay si doorasho loogu galo, taasi oo ka cad mushaarka ciidamada oo marar fara kutiris ah la bixiyay iyo dhulalka dawladda oo si indo la’aan ah loo suuq geeyay, xisbiga talada haya kuraas badan kuma uusan guuleeysan, taasi oo muujineeysa in lacag ka yar mucaaradka in ay istcimaaleen (waxaa muuqata in doorashada madaxweynaha ay lacagaha dib ugu dhiganayaan).
Xildhibaano kale ee jeebkooda ku soo galay waxay sheegen in ay filayaan in ay soo ceshtaan ‘maalgashigooda’ marki doorashada madaxweynaha ay dacdo. Cod-cod hadii loo fiiriyo, wuxuu noqon doonaa doorashada calaamka ugu qaalisan.
Tirada lagu kala guuleeystay aad ayey u weeyneeyd marki musuqmaasuq laga soo sheego
Waxaa hoos ku xusan nuqul kamid ah doorashooyinka, kaasi oo muujinaya tiro laga naxo ee musharraxiin ah oo ku guuleeystay in ka badan 80%, iyo qaar badan oo ku guuleeystay 100% – taasi oo ah arrin aan tirakoob ahaan suurtogal u aheyn haddii ay tahay doorasho xor ah oo sinnaan ay jirto. Tirokoobka hadii loo eego, waxaa la rabaa in tartamada intooda badan lagu kala badiyo 1 cod iyo ugu badnaan saddex meelood laba, marar aad dhif u ahna dadka qaar ay helaan 80% iyo kabadan.
Qiimeeyn aan ku sameynay 98 tartan, waxaan aragnay 89 tartan ee uu midka guuleystay uu helay 78.4% ama kabadan, oo ay kamid yihiin 58 qof oo heshay inta u dhaxeysa 84% iyo 98%, laba kursi aanan loo tartamin (kuwi ka soo horjeeday daqiiqada u dambeysay ayey si shaki leh u tanaasuleen); iyo 15 waxay heleen 100% ee codadka.
Tani micnaheedu waxa weye in kabadan 76% musharraxiinta waxa ay heleen inta u dhaxeyso 84% ilaa iyo 100%, mana ahan arrin caqligal ah.
In kastoo liiska hoos ku xusan uusan ka tarjumin guud ahaan natiijooyinka aan sida caadiga ah caqli galka ku aheyn (waa nuqul ay ku jiraan 9 ka hooseeyso 78% oo macquul ah). Xisaabteeyna waxay ina tusaysaa in 1% natiijooyinka lagu kala adkaaday in kabadan 78% ay si caadi ah ku imaan karaan.
Magaca Guuleystaha Codadka Boqolkiiba Aqalka
Abdiqadir Ossoble 34 66.6666667 Hoose
Maxamed Abukar Islow (Ducaale) 48 94.1176471 Hoose
C/salaan Sheekh Xasan Barsane 29 56.8627451 Hoose
Cusmaan Maxamed Cabdi 50 98.0392157 Hoose
C/laahi maxamed nuur 28 54.9019608 Hoose
Maryan ahmed haruun 38 74.5098039 Hoose
Maxamud c/laahi Ahmed 38 74.5098039 Hoose
farxiyo maxamuud dhaqane 43 84.3137255 Hoose
Maxaedm c/laahi nuux 45 88.2352941 Hoose
Muuse Suudi Yalaxow 91 92.8571429 Sare
Prof Cusmaan Maxamuud Dufle 85 86.7346939 Sare
Cusmaan Axmed Macow 73 74.4897959 Sare
Maxamed cali nuur 45 88.2352941 Hoose
C/shakuur cali mire 49 96.0784314 Hoose
C/qaadir Gaafow Maxamuud 51 100 Hoose
Yuusuf xeyle 48 94.11764706 Hoose
Naciimo maxamed cali 45 88.23529412 Hoose
Saciid Nuur Qayliye Giriish 50 98.03921569 Hoose
Saabir Nuur Shuuriye 45 88.23529412 Hoose
Mahad Maxamed Salaad 40 78.43137255 Hoose
Qaasim Maxamed Jaamac 51 100 Hoose
Duniyo Maxamed Ali 44 86.2745098 Hoose
mustaf sheekh cali dhuxulow 47 92.15686275 Hoose
Xuseen Qaasim Yuusuf 49 96.07843137 Hoose
Xasan Macalin Maxamud 48 94.11764706 Hoose
Cabdulaahi Cali Axmed 40 78.43137255 Hoose
Maxamed Cabdule Faarax 40 78.43137255 Hoose
Xersi Aadan Rooble 49 96.07843137 Hoose
cabdiraxmaan maxamed xuseen 46 90.19607843 Hoose
Maryan Cariif Qaasim 45 88.23529412 Hoose
Cabdiwali Maxamed Qanyare 49 96.07843137 Hoose
Cabdicasiis Cilmi Cali 41 80.39215686 Hoose
Ikraan Aadan 43 84.31372549 Hoose
Axmed Macalin Fiqi Axmed 47 92.15686275 Hoose
Maryam Xaaji Cabdi Geedi 48 94.11764706 Hoose
Maryam Maxamed Xuseen 48 94.11764706 Hoose
maxamed axemd abtidoon 41 80.39215686 Hoose
Cali yuusuf cali xoosh 49 96.07843137 Hoose
Cumar Cabdirashiid Cali sharmaarke 47 71.21212121 Sare
Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamud Farole 59 89.39393939 Sare
Cabdisalaam Xaaji Maxamuud Dheere 50 75.75757576 Sare
Maxamud Axmed Maxamud Mashruuc 56 84.84848485 Sare
Siciido Xasan Cismaan 41 62.12121212 Sare
Maxamed Cabdikaafi Maxamed 45 88.23529412 Hoose
Xaawo Yuusuf Axmed 40 78.43137255 Hoose
Sharmaake Garaad Saleeman 50 98.03921569 Hoose
Sacdiya Samatar 49 96.07843137 Hoose
Maxamed Xaaji Geele 49 96.07843137 Hoose
maxamed shiid cusmaan jawaari 45 88.2352941 Hoose
c/laahi shiiq ismaaciil 51 100 Hoose
maxamed saciid Abdulaahi 40 78.4313725 Hoose
C/laahi cumar Abshir 51 100 Hoose
shiiq Aadan maxamed Nuur 49 96.0784314 Hoose
sayid cali c/qaadir macalin 49 96.0784314 Hoose
maxamed jaamac mursal geelle 45 88.2352941 Hoose
Maxamed axmed mursal qoomaal 51 100 Hoose
Aaadan ibraahim ibraahim dhaa yoow 51 100 Hoose
Cali Aadan eylow 51 100 Hoose
Shiiq shaacir axmed 51 100 Hoose
Ibraahim yaroow isaaq 51 100 Hoose
Raabaca sheekh nuuroow 51 100 Hoose
Fowsiyo maxamed sheekh 51 100 Hoose
cabduqaadir shariif xasan sheekh Aadan 50 98.0392157 Hoose
Shariif maxamed cabdulaahi 45 88.2352941 Hoose
Samra cumar ibraahim 45 88.2352941 Hoose
Cabdi casis lafta gareen 45 88.2352941 Hoose
Khaliif Duureey 45 88.2352941 Hoose
Mahad Cabdalla cawad 50 98.0392157 Hoose
Maxamed Cabdi Xayir Maareeye 51 100 Hoose
Aamino Axmed 51 100 Hoose
Cilmi Maxamed Nuur 45 88.2352941 Hoose
Nimco Aadan Ciise No Contest Hoose
Saalax Axmed Jaamac No Contest Hoose
Sahro Cabdqadir Cabdinasir 48 94.1176471 Hoose
Jamal Xasan Ismaciil 50 98.0392157 Hoose
Faadumo Cali 49 96.0784314 Hoose
Cabdulahi Cusmaan Ducaale 45 88.2352941 Hoose
Cabdulahi Maxamed Adan 44 86.2745098 Hoose
Cabdiraxmaan Kulmiye Xirsi 48 94.1176471 Hoose
Cabdiqaadir Sheekh Cali Ibraahim 50 98.0392157 Hoose
Axmed Cismaan Ibraahim 49 96.0784314 Hoose
Maxamed Cabdulahi Gaandi 50 98.0392157 Hoose
Sheekh Nuur Maxamed Xasan 51 100 Hoose
Cabdiqaadir Sheekh Cali 50 98.0392157 Hoose
Axmed Cusmaan Ibraahim 49 96.0784314 Hoose
Adan Isaaq 40 78.4313725 Hoose
Fahmo Axmed Nuur 51 100 Hoose
Doorashooyinka ay diideen guddiga xallinta khilaafaadka waa in aanan loo oggolaan in la sharciyeeyo. Tani waxey keeni doontaa in geedi socodka in uu noqdo mid sharciyaddisa ay ka hoos marto inta daciifka ah ee uu hadda leeyahay.
U diyaar garowga doorashooyinka 2020/1 waa in ay hadda bilaabataa. marqaati waxay bilaabi doontaa ololoheeda in doorashooyinka ay noqdaan xor oo loo sinnaado marki ay doorashadan dhammaato. Sidaas haddii aanan la yeelin, doorasho hadalkeeda dib ayaa loo dhigo doonaa illaa ay hoggaamiyeyaasha ka dhihi karaan ‘waqti ma heysano’ oo doorasho guud lagu abaabulo sida sanadki hore ay dhacday.
Nidaamka ku saleysan in madaxweynaha baarlamanka ay soo doortaan waxaa uu xaqiiji doonaa in musuqmaasuq uu caado ka noqdo siyaasadda Soomaaliya; dadka madaxweyne u tartamaya laaluush ayey siin doonaan dadka xildhibaanada ah si kastaba halagu soo doortee baarlamaanka. marqaati waxey soo jeedineysaa in dastuurka la bedelo oo laga dhigo in dadweynaha ay si toos ah u doortaan dhammaan hoggaamiyeyaasha siyaasadda.
Hay’adaha bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed waa in ay geesi noqdaan oo ay ka qeyb qaataan lasocodka iyo faaqidaadda doorashooyinka. Aamusnaanta waxey calaamad u tahay ka raali noqoshada.
Qaswadeyaasha iyo madaxda siyaasadda ee wada is-horistaagga islaxisaabtanka yar ee hadda dhacay waa in bulshada caalamka ay cunaqabateeysaa.
Fashil siyaasadeed ee heer walba leh ayaa keenay in dib u dhacdo iyo in ay wiiqdo geedi scodka doorashooynka dadban. Si dib loogu hanto wax u dhigma sharciyad, waa in ay dhacdaa islaxisaabtan ku aadan tacaddiyada dhacay.
Waxaa qormadaan lagu xereeyey Marqaati mark’ay ahayd Diseembar 22, 2016 uu qoray Maxamed Mubarak.
NO MAGACA WAKIILKA XISBIGA HESHIISKA UU U SAXIIXAY
1 Muxyadiin Maxamed Xaaji Kulan
2 Dr. Cali Cumar Abati Somali National Union
3 Axmed Yuusuf Ibrahim ILEYS
4 Ugaas Cabdullahi National Democratic Party
5 Maxamuud Axmed Nuur Social Justice Party
6 Yuusuf Axmed Yalaxow SDU
7 Dr. Yuusuf Shimbir Midnimada Qaranka Soomaliyeed
8 Xassan Cabdi Khalif Shaqsiyad iyo Wadaniyad
9 Salaad Cali Jeele Midnimada iyo Dimoquraadiyadda
10 Said Cusman Ibraahim Peace and National Unity
11 Cabdullahi Isaaq Aadan Somali National Democratic
12 Cali Maxamed Nuur Midnimada Jamhuuriga Soomaliya
13 Suleyman Yuusuf Cilmi Horumarinta Ummadda Soomaaliyeed
14 Faarax Salaad Dharaar Somali National Party
15 Salaad Maxamed Sabriye Wadaniyiinta Soomaliyeed
16 Caydarus Maxamed Cabdi United Somali Roots (USR)
17 Nadifo Abdullahi Abdi Justice and Development Party
18 Maxamuud Maxamed Daahir Isbahaaysiga Isbadal Doonka Soomaliyeed
19 Safiyo Maxamed Cali Somali Peoples Party
20 Caasho Maxamuud Warsame Samokaab
21 Abdullahi Sheikh Dahir Midowga Nabada iyo Demoqoraadiyada
22 Wali Magan Diriye Democratic Party of Somalia
23 C/qaadir Sheikh ISmail Tayo
24 Dr. Mohamed Ali Ibrahim Somali National Party for Change and Development
25 Said J. Ali Korshel Somali National Party
26 Dr. Zakaria Mohamed Haji Abdi Qaranka Ummadda
27 Eng. Ahmed Salad Adan Sahan Qaran
28 Kamaudin Abdullahi Mohamud S.P.P
29 Mohamed Abiikar Maye Somali Citizens’ Alliance
30 Ahmed Barre Midnimo
Waxaa qormadaan lagu xereeyey Marqaati mark’ay ahayd Febraayo 23, 2016 uu qoray Maxamed Mubarak.
Sawiro: Dhul Dawladeed Ee Si Sharci Daro Ah Loo Iibiyay
Dhamaadka xiliga ku meel gaarka ah ee 2012 wuxuu keenay in qiimaha dhulalka Muqdisho ay cirka isku shareeraan ee meelaha qaar ay gaaraan toban-laab heerkoodi hore. Tani waxay keentay in shaqsiyaad gaar ah ay iibsadaan dhulal guud iyagoo u maraya saaxiibadood ka tirsan dawlada.
Maanta oo ah maalinta la dagaalanka musuq maasuqa ee caalamiga ah, aan eegno saameynta musuq maasuqa uu ku yeeshay Muqdisho halkaasi oo si aanan daah furneyn inta badan jardiinooyinka dadweynaha laga iibiyay shaqsiyaad lagana dhigay goobo lagu iibiyo petrool ama goob maqaayad ah.
Petrol station kaan ku yaala KM4 wuxuu ku yaalaa dhul guud.
Petrol stationkaan ku yaala Hawlwadaag waxaa laga dhisay dhul guud oo aheyd jardino.
Tan waa qeyb ka tirsan Afara Jardino ee qeybta Bondhere. Waxaa laga dhigay maqaayad.
Tani waa Afarta Jardino qeybta Yaqshid. Sawirkan hal sano ka hor baa la qaaday inta aanan shaqada laga bilaabin goobta.
Waa tanaa goobti oo shaqo laga bilaabay sanadkan kadib ku dhawaad hal sano oo shaqo laga qaban kadib marki uu maamulka gobolka soo fara galiyay. Hada cid hor taagan malahan shaqada wey socotaa.
Gaarigaan carada buu goobta ka saarayaa iyadoo goobta petrol station laga dhigayo.
Goobtaan ee degmada cabdicaziiz waxay aheyd goob shidaal xiligi 1991 ka hor. Sanadkan waxaa la wareegay sharikad gaar loo leeyahay.
Goobtaan SInai (Bondhere) waxay aheyd goob shidaal lagu iibiyo ee dawlada leedahay. Waxaa shaqo ka wada shaqsiyaad gaar ah.
Tani waa Jardinka Florensa ee hada laga iibiyay sharikad loo yaqaano Hass Petroleum.
Waxaa qormadaan lagu xereeyey Marqaati mark’ay ahayd Diseembar 9, 2014 uu qoray Maxamed Mubarak.